UCharles Perrault: i-biography kunye namabali abantwana abalaseleyo | Uncwadi lwangoku
UCharles Perrault ngumbhali osele eyinxalenye yobuntwana bethu, kwimbali, yengxelo yendalo iphela. Ngawakhe amanye amabali abantwana adumileyo naphelelwa lixesha, nangona inyani yalo mbhali ongumFrentshi yayihlala ijikeleze ubukumkani kunye "nehlabathi lokwenyani" kunamaphupha. Ubomi nomsebenzi kaCharles Perrault Ayisiyonto inomdla nje kuphela ngokwembali, kodwa kwakhona xa kufikwa ekuqondeni umlingo owaguqula ngonaphakade amandla okubalisa.
1 UCharles Perrault: umbalisi wenkundla eNkundleni
2 UCharles Perrault: Amabali akhe amaFutshane aBalaseleyo
2.1 Idurmiente entle
2.2 Into yokuqabela encinci
2.3 Iindevu eziBlue
2.4 Ikati eneebhutsi
UCharles Perrault: umbalisi wenkundla eNkundleni
UCharles Perrault wazalwa ngoJanuwari 12, 1628 eParis, Esifubeni sosapho loohlohlesakhe owayengugqwetha ePalamente, olwamvumela ukuba onwabele ubomi obunelungelo. U-Perrault wazalwa ngexesha lokuzalwa okuphindwe kabini amawele akhe, uFrançois, wasweleka kwiinyanga ezintandathu emva kokuba eze emhlabeni.
Ngo-1637 wangena kwiKholeji yaseBeauvais, apho wabonisa khona ubuchule obukhulu ngeelwimi ezifileyo. Ngo-1643 waqala ukufunda umthetho Ukulandela ekhondweni likayise kunye nomntakwabo, uPierre, umqokeleli jikelele kunye nomkhuseli wakhe ophambili. Kwaye kukuba esemncinci kakhulu, uPerrault wabonisa amandla amakhulu ezifundo, le yayiyeyona nto iphambili kuye ebomini bakhe.
Ngo-1951 waphumelela kwi-Bar Association kwaye kwiminyaka emithathu kamva waba ligosa kwinkqubo karhulumente. Phakathi kweminikelo yakhe yokuqala, umbhali uthathe inxaxheba ekwenziweni kweAkhademi yeSayensi kunye neAkhademi yoBugcisa. Nangona kunjalo, ngaphandle kwesikhundla sakhe kwicandelo lezopolitiko kunye nobudlelwane bakhe nezobugcisa, uPerrault akazange aphikisane nenkqubo kwaye akazange anike mqondiso wento emnandi yokuba amabali akhe azakukhupha emva kweminyaka. Ubomi bakhe babupheleliselwe ekufezeni umsebenzi wakhe kwaye ehlonipha uKumkani uLouis XIV ngohlobo lwemibongo kunye neengxoxo, ezamenza wanconywa ngeendawo eziphakamileyo kunye nesikhundla sikanobhala weFrench Academy ngo-1663 phantsi kwentsimbi yomkhuseli wakhe omkhulu, uColbert, umcebisi kuLouis XIV.
Ngo-1665, wayeza kuba ngomnye wamagosa asebukhosini. Ngo-1671 wonyulwa njengo-Chancellor we-Academy waza watshata no-Marie Guichon, owayenentombi yakhe yokuqala ngo-1673. Wayenabanye abantwana abathathu, eswelekelwa ngumfazi emva kokuzalwa kowokugqibela, ngo-1678. Kwiminyaka emibini kamva, uPerrault kwafuneka anikezele ngesikhundla sakhe kunyana kaColbert, umzuzu owawuza kuphawula ukutshintsha kwakhe abe ngumbhali wombhali wabantwana. wayenjalo Iimbali ezivela kwixesha elidlulileyo, eyaziwa ngokuba yiTales of Mother Goose. Ngaphandle kokubhala onke la mabali ngo-1683, ngekhe apapashwe kude kube ngo-1697.
Ngexesha lakhe lokugqibela lobomi, uPerrault wazinikela ekubhaleni ii-odes kubukumkani, inkosi yaseSweden, eSpain, ngakumbi, noLouis XIV. Unikezele lo mbongo kuye El Inkulungwane kaLouis the Great, eyabangela isiphithiphithi esikhulu emva kokupapashwa kwayo ngo-1687.
UCharles Perrault wasweleka ngoMeyi 16, 1703 eParis.
UCharles Perrault: Amabali akhe amaFutshane aBalaseleyo
Nangona inxalenye yomsebenzi wakhe wokubhala (kubandakanywa nemisebenzi yakhe engama-46 epapashwe emva kokufa) wayethetha ngookumkani, iNkundla kunye nemeko yezopolitiko, Amabali abantwana bakaPerrault zaziquka imilinganiselo yokuziphatha umbhali ayibona iyimfuneko ngamaxesha anzima afana nalawo enkulungwane ye-XNUMX yeFrance.
I-Ogres, i-fairies, iikati ezikhutshiweyo kunye neenkosazana zaqala ukuthwalwa entlokweni yakhe ziphefumlelwe ngamabali asasazeka phakathi kweeklasi eziphezulu njengelifa le-oratory evela kwamanye amazwe aseYurophu kunye nezinye ezingaqhelekanga. Kananjalo, iisetingi zokwenyani ezazidla ngokundwendwelwa ngumbhali, ezifana nenqaba yase-Ussé, kwisebe le-Indre neLoire, ziya kukhuthaza amabali anje ngobuhle bokulala.
Incwadi eqokelele inxenye yala mabali ibinesihloko Imbali ou contes du temps pass, avec des moralités ngesihloko se Contes de ma mère l'Oye kwiphepha elingasemva. Umthamo wawunamabali asibhozo, awona adumileyo nguCharles Perrault:
Ibali elidumileyo leNkosazana u-Aurora, ogwetyelwe ukulala ngonaphakade emva kokuhlatywa ngentonga yokuluka, uye waba lelinye lawona mabali aphelelwe lixesha kwimbali. U-Perrault utsale kwi ukulala inkosazana intsomi Ukuphindaphindeka kumabali amadala eIcelandic okanye eSpanish kwaye kongeze umnqa ngakumbi kunye nokuqonda.
Into yokuqabela encinci
Ibali lentombazana enxibe isigqoko esibomvu esibalekele kwingcuka kwindlela eya kwindlu kaninakhulu yavela ilivo lamaxesha aphakathi ukuphawula umahluko phakathi komzi nehlathi. I-Perrault icinezele ezona nkcukacha zintle (njengesimemo sengcuka kwiLittle Red Riding Hood yokutya intsalela kamakhulu wakhe) kwaye kufanelekile isimilo esijolise kubo bonke abafazi abancinci xa kufikwa ekubathinteleni ekuhlanganeni nabantu abangabaziyo.
Ingxelo encinci yamabali kaPerrault abhekisa kumfazi ofumene izidumbu zabafazi bendoda yakhe entsha kwibhotwe elibi. Nangona imbali yendlu enobukhazikhazi kunye nomyeni ongaqondakaliyo evela kwiintsomi ezifanayo zamaGrike, kukholelwa ukuba iPerrault iphefumlelwe ngamanani anje ngombulali obulalayo UGilles de Rais, inkulu ye-XNUMX yaseBreton.
Ikati yonyana womsila olishiya lifa lakhe lonke emva kokuba eswelekile iba sisiseko selona bali lihlekisayo ukutolikwa kwalo kuphakamisa ingxoxo engaphezulu kwesinye. Abanye bathembele kwithiyori yokuba ikati e-humanized eqhuba ishishini yayisisifundo kulawulo lweshishini, ngelixa abanye balatha kwisilwanyana esixhonyiweyo njengesikweko sesilwanyana somntu.
Ambalwa amabali awele ixesha elininzi kunelo Cinderella, ibhinqa eliselula ebelikhonza umama wakhe wesibini kunye noosisi ababini abanqwenela ukutshata inkosana. Ibali libonisa olona daba ludala emhlabeni: umlo wokulungileyo nxamnye nobubi, umxholo owawusele ukhona kwenye yeenguqulelo zokuqala zebali lase-Egypt yakudala.
UThumbelina wayengoyena mncinci kubantwana abasibhozo. Uncedo olukhulu olwamvumela ukuba azifihle ngeebhutsi ze-ogre owayefuna ukuzitya zonke. Isikweko eso silinganisi asimiseli ixabiso lomntu.
Amanye amabali amabini afakiwe kule ncwadi Iifiriyi kunye neRiquet kunye nepompadour, engaziwa kancinci. Kwelinye icala, ingxelo elandelayo yeentsomi zikaMama Goose yafakwa Ulusu lwempundu, enye iklasikhi yePerrault eyakhanyela umbulo ngokubalisa ibali lokumkani owayefuna ukutshata intombi yakhe.
Leliphi ibali olithandayo likaCharles Perrault?
Ngaba ubuyazi le nto Amabali ama-7 afundwayo ngexesha lokukhwela kwindlela engaphantsi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » UCharles Perrault: i-biography kunye namabali abantwana abalungileyo
Uyalazi ushicilelo lwendlu yokupapasha i-Edhasa, intle kakhulu ekuqokeleleni kwayo IINCWADI ZONCWADI, isimanga
Inqaku elimnandi, ndilonwabele kakhulu. Ndicinga konke, ukulala ubuhle yeyona nto ndiyithandayo. Jonga upapasho kakuhle, zikhona ezinye iintlobo (1951 / suss). Ndiqalile ukukulandela, ibhlog yakho intle.
UDaniela carmenn sitsho
Uncwadi oluhle kakhulu
Phendula kuDaniela carmenn
Molo, uxolo kodwa ukhona umhla ongalunganga ngawo "Ngo-1951 waphumelela iBar Association"
Umbhali ogqwesileyo, bubutyebi ukukwazi ukonwabela imisebenzi ye-titan, kwaye umyalezo wakhe unokuziqhelanisa neemeko zanamhlanje luphawu lokuba wonwabele umbono olungileyo. Kwaye nangona uninzi lwamabali abo belahlekelwa yinxalenye yomxholo kulungelelwaniso lwefilimu, zisenobunzima obungenakulinganiswa.
molo, ndingalichaza njani eli phepha nceda, andiwufumani umhla elenziwa ngalo….
URosa Montero, uwongwe ngeBhaso leSizwe loNcwadi ngo-2017